Rumayso: Mareykanka oo muwaadiniinta uga digay in habeenkii ku dhexsocdaan Oslo – SBC
Rumayso: Mareykanka oo muwaadiniinta uga digay in habeenkii ku dhexsocdaan Oslo
Posted by editor on January 24, 2012 Comments
Inta badan waxaan warbaahinta ka baahinnaa Mareykanka iyo wadamada reer Galbeedka oo muwaadiniintooda ugu baaqa inaanay u socdaalin Soomaaliya, ay inay feejignaan dheeraad ah galaan hadii ay booqanayaan Kenya, Ugandha, Yemen, Pakistan, Ciraaq iyo wadamo laakiin dad badan ayey la yaab ku noqon kartaa ciwaanka sheekadan ee ah in Mareykanku uu uga digay muwaadiniintiisa inaanay ku socon habeenii saqda dhexe bartamaha magaalada Oslo ee caasimada Norway.
Norway waxay ka mid tahay sida la sheegayo wadamada ugu xasiloon dunida dhaqaale amni iyo horumar balaaran laakin in maanta digniin xaga amaanka ah laga bixiyo waxa kaaney ay eegno.
Safaarada Mareykanka ee magaalada Oslo waxay ku siiyey digniin Talaadadii muwaadiniinta Mareykanka inay taxadar dheeraad ah muujiyaan marka ay habeenkii u baxayaan magaalada Oslo isla markaana qofku iska ilaaliyo in uu kaligiis baxo, tani waxay ka dambeysay ka dib markii falal amaan daro ay ka dhaceen magaalada Oslo bilhii la soo dhaafay.
Safaaradu waxay soo xigatey weerar toorey loo adeegsaday oo ka dhacay fagaaraha lagu magacaabo Solli Plass ee bartamaha magaalada Oslo 5-tii bishii January, iyo waliba laba weerar oo kale oo ka dhacay isla 10-kii bishan xarunta tareenada Oso, sidoo kale waxay soo qaadatay weeraro kale oo ka dhacay beerta Slottsparken.
Digniinta la siiyey muwaadiniinta Mareykanka oo shan qodob ka kooban ayaa la sheegay inay muhiim tahay inay qaataan si kasta oo ay Norway u tahay wadan amaan ah.
1. Hadii ay macquul tahay kaligaa ha socon, hadii aad magaalada ku soo daahdey, isku day inaad la socoto dad hadii kale ka fakar nooc kale oo socod gaadiid ah.
2. Isku day inaad ku sugnaato goob iftiin leh oo ay dadkuna ku badan yihiin.
3. isku day inaad mar kasta ka warqabto hareerahaaga, eegna wixii qatar ah oo kugu dhaw inta aanay noqon qatar ku wajahda.
4. Aamin jawiga, oo hadii ay dhacdo in wax kuugu muuqdaan caadi la’aan go’aansado inaad ka baxdo goobtaasi.
5. Ilaali telefoonkaaga Mobile-ka oo ah kuu dhawaado, hana ahaado mid charge-gareysan ama buuxo batarigiisu si aad u adeegsato hadii aad u baahato caawimaad, lambarka Booliisku waa 112, kaasi oo ka waci karto khadka telefoonada dhulka (land line) ama cell phone oo ah taleefomada gacanta lagu qaado.
Warbaahinta wadanka Norway oo uu ugu horeeyo NRK waxay si weyn u faaqidayeen mudooyinkii tagey weeraro joogto ah oo ka oogan magaalada Oslo, iyadoo ay ka mid yihiin kufsi iyo falal kale oo amaanka lidi ku ah oo si bareer ah uga dhacaya wadooyinka magaalada.
Waxaa hubanti ah in sidoo kale ay arintan qiimeeyaan dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Oslo, iyadoo wadanka Norway ay ku dhaqan yihiin kumaan kun oo Soomaali ah, isla markaana dambi geystuhu uu beegsan karo qof kasta.